Ndingaya ekliniki ukuya kucwangcisa ngexesha le-COVID-19 nangexesha lokuma ngxishi kweenkqubo? – Messages for Mothers
Physical Health isiXhosa
Ndingaya ekliniki ukuya kucwangcisa ngexesha le-COVID-19 nangexesha lokuma ngxishi kweenkqubo?
Ewe. Usengakwazi ukufumana iinkqubo zokuhlela usapho kwikliniki ekufutshane kodwa zama ukufumana ukuba kukho utshintsho kwezi nkonzo. Qiniseka ngokuqhubeka nokucwangcisa usapho lwakho ngeli xesha ukuze unqande ukukhulelwa okungeyomfuneko. Khumbula ukuba idyasi yootata ikunika ukhuseleko ekumitheni, isandlulela sikagawulayo [HIV] kunye nezinye izifo ezisulela ngesondo. Ukuba ulungiselela ukukhulelwa kungcono ukuba ulinde kugqithe ingxaki ye-COVID-19.
← Ndingalukhusela njani usana lwam kwi-COVID-19 xa ndiphila nosapho ulubanzi yaye abanye besebenza ngaphandle endlwini? → Ndikhulelwe yaye ndisebenzisa izithuthi zikawonkewonke ukuya ekliniki. Ingaba ndingaqhubeka ndisiya ekliniki?